Toliara: nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa lavon’ny polisy | NewsMada
Toliara: nirefodrefotra ny basy, jiolahy roa lavon’ny polisy
Lavon’ny balan’ny polisin’ny UIR tao Toliara nandritra ny fifanenjehana ny roa tamin’ireo jiolahy miisa fito raindahiny amin’ny fanafihana mitam-piadiana. Ny zoma alina teo no nitrangan’ny fanafihana…
Saron’ny polisin’ny UIR tao Toliara tamin’io fotoana io ny jiolahy raindahiny miisa fito. Raha ny fampitam-baovao avy amin’ny polisy, ny roa amin’izy ireo nitondra basy vita gasy sy sabatra. Nandritra ny fisafoana nataon’ny polisy no nandrenesan’izy ireo olona miantso vonjy ka nanavotra haingana ireo olona niantso vonjy ny polisy. Nisy ny fifanenjehana ka maty voatifitra ny roa tamin’ireo jiolahy raha azo sambo-belona kosa ireo namany dimy lahy. Malaza ratsy amin’ny fanendahana sy sinto-mahery ao Toliara ireto jiolahy ireo, raha ny tatitra avy amin’ny polisy hatrany.
Fa sesilany koa ny fanafihana mitam-piadiana ao Mahajanga. Omaly maraina, jiolahy miisa valo nitondra basy Kalachnikov sy PA nanafika mpividy sy mpivarotra volamena ao Manjarisoa. Lasan’ireo jiolahy tamin’izany ny volamena 500 grama sy vola 40 tapitrisa Ar. Naratra notsindronin’ireo jiolahy ny vy ny renim-pianakaviana tao an-trano raha voadaroka kosa ireo zanany. Tao Morafeno, mpanao volamena iray koa niharan’ny fanafihan-jiolahy tokony ho tamin’ny 3 ora maraina. Tsiahivina fa teratany karana iray tompona magazay fivarotana firavaka volamena ao Mahajanga be no niharan’ny fanafihan-jiolahy, ny herinandro teo ihany. Namoy ny ainy mihitsy ity Karana voatifitra ity.